थरुहट प्रदेश मागका सम्बन्धमा सरकारले पछिल्लो पटक वार्ताको आह्वान गरे लगत्तै आन्दोलनकारीका तर्फबाट अहिले नेताहरू राजकुमार लेखी, मिनराज चौधरी र अमनलाल मोदी सरकारसँग अनौपचारिक वार्तामा सक्रिय छन्। तर, अहिलेसम्म वार्तामा ठोस प्रगाति भने भएको छैन। यसै परिप्रेक्षमा जनजाती महासंघका पुर्वअध्यक्ष समेत रहेका लेखीसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
टीकापुर घटना अत्यन्त दुखदायी र दर्दनाक घटना हो। रक्तपातले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। मर्ने सबै नेपाली दाजुभाइ हुन्। आफू-आफूमा लडेर कसले जित्ने र कसले हार्ने? यो त मानवजाति कै लागि दुखद कुरा हो। घटनाप्रति दुःख र समवेदना ब्यक्त गर्दछु।
अनौपचारिक वार्तामा ब्यस्त हुनुहुन्छ िक हुँदैछ वार्ता?
शान्तिपूर्ण आन्दोलन उत्तेजित बनाउने काम भने राज्यले नै गरेको हो। हिंसा भड्काउनेलाइ छाड्ने भनेको होइन। तर जथाभाबी पक्राउ गर्ने काम राज्यले बन्द गर्नु पर्छ र पक्राउ परेकालाई छाड्नु पर्छर हाम्रो आन्दोलन बिखण्डनकारी होइन र प्रायोजित पनि छैन। वार्ताद्वारा नै सबैकुरा मिल्छ।
अहिलेको संविधानको मस्यौदामा हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन्। धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, थारू आयोग गठन लगायतका मुद्धा सम्बोधन भएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकता ६० प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशत भयो। यो राम्रो होइन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त थारूको भूमिका बेगर नै प्रदेश संरचनाको निर्माण भयो। थारू सोझा हुन्छन् भन्दैमा उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। अन्य क्षेत्रका मानिसको माग पुरा भयो तर हाम्रो भएन किनकि ती क्षेत्रका मानिसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व छ। सबै थारूले प्रश्न उठाउँछन हाम्रा माग किन सम्बोधन भएन भनेर छुट्टै देश निर्माण गर्न बन्दुक बोक्ने र शरणार्थी हुने चाहना थारूमा छैन। हामीलाई कसैले उचाल्न पर्दैन। आफ्ना अधिकारका लागि बरु १०० वर्ष लड्न तयार छौं। शान्तिपूर्ण ढंगले लड्छौं यही भूमिमा। अरुको बुइ चढेर अधिकार खोज्दैनौं। हामीलाई हाम्रो देशको माया छ।
थारू आन्दोलन वि.स. २००५ देखि अर्थात् ७० वर्षदेखि हुँदैछ। हामीलाई राज्यले गरेको विभेदविरुद्ध र आफ्ना अधिकारका लागि लड्दै छौं। ०६३ सालमा नयाँ चरणको आन्दोलनमार्फत १३ बुँदे माग प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो आन्दोलनलाइ कसैले उचाल्नु पर्दैन। हामी २५ लाख छौं । राजनीतिक दल झैँ हाम्रो सामाजिक संस्था छ। कसैको इशारामा कसैको पैसा लिएर चल्ने आन्दोलन होइन, हाम्रो।
जात भित्र वर्ग पनि हुन्छ। थारूभित्र पनि सबै मानिस उही तरिकाले उपेक्षित छैनन्। पश्चिम कर्णालीको गरीब बस्तीमा तपाईं गए पनि म गए पनि भारी बोक्ने गरीब क्षेत्री बाहुन हुन्छ। तपाईंको र मेरो हैसियत उस्तै हो। उहाँहरू र मेरो फरक कुरा यही हो कुनै एक जातिलाइ जथाभावी गाली गरेर आफू अघि बढ्छु भनेर सोच्नु हुँदैन।
मैले चन्दा लिने र बाँडने काम पनि बन्द गरें। मैले कुनै एनजिओ खोलिनँ। डिफडको १२ करोड फिर्ता गरें। उनीहरूले भनेको मान्ने र कर्मचारी बन्ने होइन हामी। म अवसरवादी पनि भइनँ। एमाले पार्टीमा म लामो समयदेखि रहेको हुँ। मलाई पनि सभासद् बन्न अफर नआएको होइन। तर मैले त्यस्तो बाटो रोजिनँ।
स्रोत: सेतोपाटीडटकम,प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २९, २०७२